“Sannadkii Waxaanu Awood u Yeellanaynaa Inaanu Dejinno 200.000 oo Kontiinar” |
“Sannadkii Waxaanu Awood u Yeellanaynaa Inaanu Dejinno 200.000 oo Kontiinar”
Hargeysa(GNN)- Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya, ayaa wax ka qoray heshiiska lagu horumarinayo dekadda Berbera ee ay wada galeen dawladda Somaliland iyo shirkadda DP World,waxaanu sheegay in dekedda Berbera oo ku taalla bogcad istaraataji ah ay kaalin weyn ka qaadan doonto ganacsiga gobolka.
Warkan wargeysku waxa uu ciwaan uga dhigay “Somaliland waxay naawilaysaa in Dekeddu ay xoojiso madax-banaanidooda”. Qormaddan oo aad u dheerayd waxa soo turjumay Tifaftiraha guud ee DAWAN Mr. Cumar Maxamed Faarax, waxaanay u qornayd intii ugu muhiimsanayd sidan:-“Casriyayn lagu sameynayo dekadda Berbera oo lagu binaynayo goobihii adeega koontiinarada oo suurtogelinaya inay marsaddani noqoto marin caalamiya, ayaa heshiiskeedii ay kala saxeexdeen dawladda Somaliland iyo shirkadda imaaraadka carabta laga leeyahay ee DP World, si dekadaasi u horumarto. Dekadani waxay ku taallaa dalkan nabdoon ee degan.”
Somaliland waxay ahayd dal aan la aqoonsanayn muddo 25 sannadood ah, waxaanay aaminsan yihiin horumarinta dekadoodu inay kaalin weyn ka qaadanayso qaranimadooda. Dekedda Berbera waxa inta badan ka dhoofa xoolaha nool ee ay dalalka khaliijka u iibgeyso, waxa kale oo ay dejisaa 40.000 oo kontiinar sannadkiiba.
“Waxaanu doonaynaa inaanu Berbera ka dhigno mid ka mid ah dekedaha ganacsiga caalamka, isla markaana ay marin u noqoto Geeska Afrika,”ayuu yidhi Maareeyaha dekedda Cali Cumar Maxamed.
Wali macluumaadka heshiiska dekedda ee DP World lama dhammaystirin, waxase ay Somaliland sheegtay in laba laabayso baaxadda iyo mugga marsadda. “Sannadkii waxaannu awood u yeellanaynaa inaanu dejinno 200.000 oo koontiinar. Berbera waa mid ku taalla meel istaraataji ah sida Jabuuti oo kale,”ayuu yidhi Maareeyaha dekeddu.
Berberi waxay ku taallaa badda cas, waxa mara badeecadaha u kala gudbaya Carabta, Asia iyo Yurub.
Somaliland waxay haysataa fursad ah inay wax uga soo degaan dalka Itoobiya aan badda lahayn ee la jaarka ah oo suuqiisu kobcayo isla markaana ay dadkiisu yihiin illaa 96 Milyan oo qof.Somaliland waxay Itoobiya la saxeexatay bishii March ee sannadkan in badeecadaha Itoobiya qeyb ka mid ahi ka soo degto Berbera.
Heshiiskani waxa uu saamaynayaa iskaashiga Somaliland ku kasbanayso dalalka Khaliijka. Kuwait waxay hore u maalgelisay dib u habayn lagu sameeyay Madaarka caasimadda Hargeysa, waxa kale oo ay dhistay dugsiyo lagu barto diinta. Halka Imaaraadka diyaaradoodu ay ka mid tahay dhawr diyaaradood oo duulimaadyadoodu maalin walba tagaan Somaliland. “Heshiiska DP World waxa uu ahaa fursadii ugu fiicnayd,”ayuu yidhi Maareeyaha dekeddu.
caqabadaha ugu badan ee la sheegi karaana waa in la dhiso jid qaadi kara Gaadiidka koontiinarada u sida Itoobiya. Somaliland oo dadkeedu yihiin afar milyan oo qof.Miisaaniyadda dawladda Somaliland waa $250 Milyan oo doolar oo u dhiganta 220 Milyan oo Euro, waxaanay leedahay lacagteeda, balse ma awoodi karto inay la xidhiidho baanka adduunka si ay uga soo deynsato dhaqaale ay ku horumariso kaabeyaasheeda dhaqaalaha.”